आजदेखि पसल खोल्न र सवारीसाधन चलाउन पाइने तर यी नियम थाहा पाइराख्नुस् ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आजदेखि पसल खोल्न र सवारीसाधन चलाउन पाइने तर यी नियम थाहा पाइराख्नुस् !
काठमाडौं – कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका बेला नै मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकले आज बिहीबारदेखि पसल खोल्ने पाइने निर्णय गरेको छ ।बैठकले निजी सवारीसाधनलाई पनि जोरबिजोरका आधारमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय देशभर सबै क्षेत्रमा लागू हुने छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय काठमाडौं उपत्यका लगायतका कोरोना भाइरसको संक्रमण कम भएका क्षेत्रमा मात्रै लागू हुनेछ । कोरोना संक्रमण बढी भएका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासनले लकडाउनमा कडाइ गर्न सक्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जनजीवन सहज पार्नका लागि निर्णय लिने जानकारी दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को राति १० बजे सकिएको बैठकले जनजीवन सहज पार्नका लागि पसल खोल्न दिने र निजी सवारीसाधन सञ्चालनमा पनि खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको हो ।
निजी सवारीसाधन सञ्चालनमा समेत नियम बनाइएको छ । तोकिएको नियम पालना गरेर सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइने छ । ‘ट्याक्सी, मोटरसाइकल लगायतका निजी सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । ती सवारीसाधन जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुनेछन् । लामो रुटकालाई भने अहिले अनुमति नदिने भनिएको छ,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भने । जोर अंकको गते सवारीसाधनको अन्तिम अंक जोर भएका सवारीसाधन र बिजोर अंकको गते सवारीसाधनको अन्तिम अंक बिजोर भएका सवारीसाधन मात्रै चल्न पाउने भएका छन् ।
जसअनुसार चारपांग्रे निजी सवारीसाधनमा चालकबाहेक २ जना र मोटरसाइकलमा १ जना मात्रै बस्न पाउने नियम बनाइएको छ । यसबाहेक पसल र सवारीसाधन सञ्चालनका क्रममा कोरोनाबाट बच्ने मास्क, स्यानिटाइजर, पञ्जा लगायतका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनको खुकुलो पार्ने मोडालिटी तय गरेको छ । आगामी असार १ गतेदेखि सरकारी कार्यालय समेत खुल्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार १ गतेदेखि सरकारी कार्यालयहरू खोल्ने निर्णय गरेको छ ।कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन सुरू गर्दै अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने बाहेकका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नियमित परीक्षा पनि नगर्ने निर्णय गरेको छ । यस वर्ष एसईईको नियमित परीक्षा नगरी आन्तरिक मूल्यांकन हुने जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे औपचारिक जानकारी आज बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर दिइने भएको छ । सरकारले पहिला ३ चरणको लकडाउन मोडालिटी बनाउँदै पहिलोको २१ दिनमा २१ सेवा तथा कार्य खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार पहिलो २१ दिन, त्यसको स्थिति हेरी १५ र फेरि अर्को १५ दिनको लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय भएको छ ।
पहिलो चरणमा ५०, दोस्रो चरणमा ७५ प्रतिशत कर्मचारीसहित सरकारी कार्यालय खोल्ने र तेस्रोमा गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ ।
रिक्सा तथा एक लहरमा एक जना यात्रु मात्र बस्ने गरी विद्युतीय रिक्सा, ट्याक्सीमा चालकबाहेक थप २ जना यात्रु रहने गरी चल्न दिने तयारी छ । व्यक्ति व्यक्तिबीचमा कम्तीमा २ मिटर भौतिक दूरी कायम रहने गरी रेस्टुरेन्ट तथा खाजाघर खोल्न दिने लकडाउन खुकुलो पार्र्ने मोडालिटीमा उल्लेख छ ।
पहिलो १५ दिनको विश्लेषण गरी थप १५ दिनसम्म सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय, संक्रमण जोखिम विश्लेषण गरी सयभन्दा कम सक्रिय केसहरु भएमा अन्तर जिल्ला आवाजावत, सिट क्षमताको आधा व्यक्ति रहने गरी सबै प्रकारका सवारीसाधन र आन्तरिक हवाई उडान, होटल, लज रिसोर्ट, परीक्षा प्रयोजनका लागि शिक्षण संस्था लगायतका तालिम, ट्युसन केन्द्र खोल्ने निर्णय भएको छ ।
तर ३ चरणमा शैक्षिक संस्था, सिनेमा हल, तोकिएबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवातजावत, २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुने भेला, बैठक, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, स्वीमिङ पुल, जिमखाना, ब्यूटी पार्लर, सैलुन, समूहमा खेलिने खेलकुदलगायत खोल्न पाइने छैन ।
काठमाडौं १५ दिनका लागि बन्द, के गर्न पाइन्छ के पाइदैन र्हेनुहोस्
७० करोड प्रकरण : बार्गेनिङ गर्नेलाई पुरस्कृत, सूचना बाहिर ल्याउनेलाई कारबाही